Ungaba yindoda enesitayela kanjani - Izeluleko Zemfashini | Amadoda aSitayela
Ingabe uyathanda ukuba nemfashini, kepha njalo ukumaka ubuhle? Unganqikazi ukwazi amathiphu amahle kakhulu okuba yindoda enhle, ehlelekile futhi esebenzayo. Gqoka njalo bekulokhu kuwumkhuba osetshenziswe amakhulu eminyaka. Ngokuvamile, isitayela sayo asikashintshi, kepha emashumini eminyaka sinikezwe olunye uhlobo lwesithombe olunemibala ehlukahlukene nokusikeka okubahlukanise nalabo bezinye izikhathi.
Kubalulekile ukwazi okuthandayo, izinto eziza kuqala, indlela yakho yokuphila nebala lakho, ukuze iningi lezici esizibukezayo lingana nobuntu bakho. Kubalulekile ukuthola indlela yokwenza zama ingubo ngayinye, Njengoba kubaluleke kakhulu ukuthi imininingwane ilinganiswe kahle nosayizi wakho. Ngakho-ke, akukho ukuthenga okuzokwenziwa online, ngaphandle kokuthi usuvele uyazi ukuthi leyo ngubo izwa kanjani.
1 Imininingwane kufanele ibe yinhle
2 Izingubo nezesekeli kube yinhle
3 Ubukeka kanjani buhle futhi buhle
Imininingwane kufanele ibe yinhle
Ukuzethemba nalowo ozemukela njengoba enjalo, kungenzeka kakhulu khazimula ngesitayela sakho. Zakhele isitayela sakho, ngaphandle kwamahaba, ngemibala oyithandayo futhi ezihambisana nobuntu bakho.
Uma unesici esithile somzimba funa osayizi abakhulu noma amamodeli akufanelayo, ilula njenge ukubheja ngokuletha izisekelo, kepha kuhlale kunokuthile okukuthanda kakhulu. Futhi ngaphezu kwakho konke funa ikhwalithi, Izindwangu nokwakheka kwazo kungabonakala ngeso lenyama futhi lokho kuzokukwenza uhluke.
Akudingeki nokuthi ugqoke imikhiqizo yezingubo, awudingi ukugqoka okuthile okungazizwa kahle ukubukisa ngomkhiqizo wakho. Ukwakheka kwezingubo ekhabetheni lakho kufanele abe nezinhlobonhlobo ezinkulu, ukuzisebenzisa ngawo wonke umzuzu wosuku. Njalo kufanele ube nabo bonke labo ukukwazi ukwenza ngcono, lapho kufunwa ibhalansi ukuze ukwazi ukuziqamba.
Izingubo nezesekeli kube yinhle
Umqondo wokuba yindoda ebukekayo akugcini nje ngokugqoka isudi enhle futhi usuqedile ukusesha. Kumele phenya ukuthi ungayigqoka kanjani leyo sudi enkulu, babe nokuthwala nesitayela sokukugqoka futhi uyihlanganise ngendlela engcono kakhulu.
Ebuhleni imibala elula iyanqoba, yize kufanele kucatshangwe ukuthi yimibala enyusa ivolumu. Amadoda amade futhi amancanyana anenzuzo enkulu, kepha kukho konke isixazululo. Ngenxa yalokhu bayikho amathoni amnyama lokho kuhlala kuthanda abantu abanesisindo esithile sokukhuluphala ngokweqile.
Uma, ngakolunye uhlangothi, ukhetha ukugqoka amathoni alula, kungcono gqoka ibhulukwe elincane elilinganayo futhi wazi ukuthi ungakwazi yini hlanganisa nokuthile nje okuncane, kepha hhayi okuqinile, kepha lokho kuvuna umphumela. Ungazami ukuhlanganisa imibala ekhanyayo nomunye, lokho kuyashaqisa futhi kuyisicefe, ungagqoka umbala ongavamile nento ekhanyayo, kepha ngekhanda.
Qaphela ukusetshenziswa kwezingubo zesikhumba, uma uthanda le nto kufanele yisebenzise ngokuhlakanipha futhi ungayisebenzisi ngokuhlangana nengubo engenhla nenye ngezansi. Kungaba ngokweqile futhi kungasetshenziswa, kepha ukuyisebenzisa kuphela kwesinye sezitho zomzimba.
Izicathulo eziyisisekelo zokugqoka zikanokusho. Ukhiye ungaphakathi ube nezicathulo ezinhle ezikahle nezemidlalo y abanye ukugqoka zikanokusho. Futhi uma ngiqonde okuhle, kufanele kuvezwe ukuthi akukufanele ukuthenga okuyisisekelo, kepha izicathulo lapho kungenandaba nokuchitha imali ethe xaxa. Ngokuhamba kwesikhathi bazoba yizicathulo ukuthi zizokuhlala iminyaka eminingi.
Ungaligqoka ibhande lapho umbala walo kumele uhlale ukhona hamba ngokuhambisana nezicathulo. Thayi kusebenza kangcono uma kumnyama, iyathopha kakhulu futhi emicimbini yakusihlwa ayihlonipheki. FUTHI ungakhohlwa amakha, Kufanele ngaso sonke isikhathi kube yiphunga lomuntu nelomuntu wesilisa kakhulu.
Ubukeka kanjani buhle futhi buhle
Sibuyekeze ukuthi amasudi kufanele abe kanjani, ngamathoni awo akhanyayo namnyama. Indwangu nokuqedwa kwezinto zayo kumele kungabi nakusoleka, ukuthi azishwabani kalula nokuthi zigcina lokho kuqinile, njengokungathi kusandisiwe.
Uma ugqoke isudi kufanele njalo qaqa izinkinobho zebhatyi lapho uzohlala noma uhlale endaweni ethile. Lapho-ke uma uvuka, kufanele ubophe izinkinobho futhi.
I-Las amahembe kumele ahlale e-ayinawe futhi engenacala, ngentambo noma ngezinto ezinhle zoboya. Ungabheki ukuphrinta okubizayo, amahembe angenalutho, amthende noma izikwele zidlulisela induduzo eyengeziwe esweni. Amahembe amhlophe aletha amandla negunya namahembe akhazimulayo aweluleki. Ngendlela efanayo, amahembe anemikhono emifushane awabukeki kahle.
Izicathulo kufanele zihlale zihlanzekile njalo, Akufanele kusetshenziswe amabhuzu noma amabhuzu amaqakala. Imibala kumele ibe nsundu ngamasudi amnyama futhi ihlale igcinwe ekugcineni kokhuni ukuze kungonakali.
Ekugcineni sizobuyekeza uthayi, njalo ngefindo elihle elinemininingwane. Musa ukugqoka ifindo leWindsord lezinsizwa, isivele iphelelwe yimfashini. Ubude bethayi kumele ifinyelele ekuphakameni kwebhande futhi inqobo nje uma iqondile. Ukwazi kabanzi ngale ndlela yokugqoka, bheka indatshana yethu "indlela yokugqoka nenhle".
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » imfashini » Ungaba kanjani indoda enhle